Alshabaab oo War kasoo saartay Qarixii is-miidaaminta ee Muqdisho iyo cidda ay ku beegsatay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo War kasoo saartay Qarixii is-miidaaminta ee Muqdisho iyo cidda ay ku beegsatay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii is-miidaminta ahaa ee galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
War ay baahiyeen warbaahinta kooxda ayaa lagu sheegay in masuuliyadda qaraxa, iyagoo uu fuliyey mid ka mida is-miidaamiyeyaasha Alshabaab, waxayna intaas ku dartay in lagu beegsaday ciidamada iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka.
Alshabaab ayaa sidoo kale shaacisay in weerarka is-miidaaminta ah uu qeyb ka yahay howlgalada qorsheysan ee lagu beegsanayo saraakiisha, askarta iyo shaqaalaha ee dowladda Soomaaliya.
Qasaaraha qaraxa ayaa warar kala duwan kasoo baxayaan, kadib markii qof is-miidaamiye ah uu beegsaday maqaayad ku taalla agagaarka Isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho, waxaana tirada dhimashada la gaarsiiyey in ka badan 10 qof, halka dhaawacu kor u dhaafay 20 kale.
Previous articleFaahfaahin: Qarax is-miidaamin ah oo lagu qaaday Baar ku yaalla Muqdisho iyo dad badan oo ku…
Next articleXaaladda Sheekh Mukhtar Roobow oo laga deyrinayo iyo tallaabo uu ku dhaqaaqay